iCloud Kuchengeta Kwakakwana? Usambofa Wabhadhara ICloud Backup Zvekare. - Iphone
maitiro ekuwana maapplication pa iphone
haugone kutumira email mifananidzo kubva ku iphone
ipad kunetseka kubatanidza kune wifi
iCloud Kuchengeta Kwakakwana? Usambofa Wabhadhara ICloud Backup Zvekare.
iCloud Kuchengeta ndeimwe yeanonyanya kushandiswa uye kusanzwisisika maficha eiyo iPhone. Ini ndinoda zvigadzirwa zveApple, asi hapana imwe nzira yekuisa izvi: Muzviitiko zvakawanda, kutenga iCloud Kuchengetedza hakuna basa uye haufanire kuribhadhara . Mune 99% yezviitiko, haufanire kubhadhara chero imwe mari kuti unyatso tsigira yako iPhone ne iPad . Ini ndichatsanangura chikonzero chaicho nei yako iCloud Kuchengeta izere , nei yako iPhone isina kutsigirwa kuICloud kwemavhiki , uye sei kugadzirisa iCloud negadziriro yeparutivi zvachose.
Vanhu vazhinji havatendi kuti zvinogoneka, asi rega ndijekese: Mushure mekuverenga chinyorwa ichi, iwe unonzwisisa maitiro tsigira yako iPhone, iPad, uye mapikicha kuICloud pasina kubhadhara ICloud Storage .
Kana iwe wakamboona mameseji akadai 'Iyi iPhone haina kutsigirwa mumavhiki', 'iPhone haigone kutsigirwa nekuti hapana kukwana kwakaringana kweICloud', kana 'Hazvikwani Kuchengeta', usazvidya moyo. Vachave vaenda nenguva yaunopedza kuverenga chinyorwa ichi.
Ini pakutanga ndakanyora iyi posvo mushure mekunge vanhu vazhinji vabvunza rubatsiro neICloud mushure mekunge vaverenga yangu yehutachiona posvo nezve iPhone bhatiri hupenyu . Pamwedzi gumi nemisere kubvira pandakaiburitsa, Apple yakatumidza zita uye kuendesa zvese zvandakakurukura muchinyorwa ichocho, saka ndiri kuzvinyorazve kubva pasi kumusoro.
iCloud Kuchengeta uye iCloud Drive uye iCloud Backup uye iCloud Photo Library, Ah Ini! (Hongu, yakawandisa)
Iko kusanzwisisa mhinduro yedambudziko iri pasina kunzwisisa vatambi vari mumutambo, saka tinofanirwa kutanga ipapo. Kana iwe ukavhiringidzika, uri ipapo chaipo paunofanirwa kunge uri. Ngatitorei ivo mumwe nemumwe:
ICloud Kuchengetedza ndiyo huwandu hwenzvimbo yekuchengetera inowanikwa paICloud. Ndiro raunobhadhara. Wese munhu anowana 5GB (gigabytes) mahara. Iwe unogona kukwidziridza yako yekuchengetedza kune 50GB, 200GB, kana 1TB (1 terabyte i1000 gigabytes), uye mari yemwedzi nemwedzi haina kunyanya kushata - asi iri hazvina basa . Tiri kugadzirisa dambudziko izvozvi iro rinozonyanya kudhura nenguva.
Kana yako iCloud Kuchengeta kwazara, yako iPhone inomira kutsigira kumusoro kuICloud kusvikira iwe watenga yekuwedzera nzvimbo yekuchengetedza kana sununguka nzvimbo yekuchengetera muICloud.
iphone haigone kuchengetedza ku iTunes
iCloud negadziriro yeparutivi
iCloud negadziriro yeparutivi chinhu pane iPhones, iPads uye iPods kuti kutsigira mudziyo wako wose kuna iCloud, chete kana chinhu nhamo kuitika. Unofanira zvechokwadi kushandisa iCloud negadziriro yeparutivi. Kunyangwe iri mbozhanhare kana iwe ukaisiya padenga remota yako, iPhones inorarama hupenyu hune njodzi uye iwe unofanirwa nguva dzose iva ne backup.
iCloud Backups kuverenga pamusoro yako inowanikwa iCloud Kuchengeta. (Iwe uchaona nei ndiri kutaura izvi muminiti.)
iCloud Drive chinhu chitsva chinobvumira maapps paMacs, iPhones, uye iPads kuti aenzanise mafaera uchishandisa iCloud. Zvakafanana neDropbox kana Google Drive, asi yakanyanyobatanidzwa muApple software nekuti Apple yakazviita. ICloud Drive inogovera mafaera senge magwaro uye zvido zvemushandisi zvisina kukura zvakanyanya kutanga, saka muzviitiko zvakawanda haina zvakawanda zvazvinoita pane yako yakazara iCloud Kuchengeta.
Mafaira muICloud Drive kuverenga kunopesana neako aripo iCloud Kuchengeta.
ICloud Photo Raibhurari
ICloud Photo Library inoisa uye inochengeta ese ako mapikicha nemavhidhiyo muICloud kuitira kuti ugone kuzviwana kubva pamidziyo yako yese. Pane misiyano yakakosha pakati peICloud Photo Library uye iCloud backup yaunofanira kunzwisisa tisati taenderera mberi.
Midziyo yako yese inokwanisa kuwana uye kuona mapikicha ega ega akachengetwa muICloud Photo Library. iCloud negadziriro yeparutivi zvakasiyana: Haugoni kuona munhu mafaira kana mapikicha yenyu iCloud negadziriro yeparutivi, kunyange kana mapikicha vari chikamu negadziriro yeparutivi. iCloud Backups ndeimwe hombe faira rinodzoreredza yako yese iPhone - hapana nzira yekuwana yega mafaira.
Kana iwe uri kushandisa iCloud Photo Library uye iCloud Backup, iwe unogona kunge uchibhadhara kubhadhara izvo zvakafanana mapikicha kaviri: Pane imwe muICloud Photo Library yako, kamwe muICloud Backup yako.
Mifananidzo nemavhidhiyo muICloud Photo Library kuverenga zvichipesana neako anowanikwa iCloud Kuchengeta.
My Photo Stream (Ehe, tiri kuwedzera imwe)
Yangu Photo Stream inoisa ako ese matsva mafoto uye anoatumira iwo kune ako ese zvishandiso. Zvinonzwika kunge iCloud Photo Library, handiti? Asi pane musiyano mudiki:
Mifananidzo muMy Photo Stream USA kuverenga kupokana neako aripo iCloud Kuchengetedza.
Uri munzira yako kuenda kumhinduro, asi zvakakosha kuti unzwisise misiyano yakakosha pakati peICloud Photo Raibhurari uye Yangu Photo Stream usati wanyura mune chaiyo gadziriso. Ini ndichatsanangura kuti nei yako iCloud Kuchengeta nguva dzose izere pane rinotevera peji.
Mapeji (1 ye3):